Ogaden News Agency (ONA) – Xoghahayaha Golaha dhexe ee JWXO iyo Masuuliyiinta jaaliyada UK oo ka qeybgalay shirweynihii Universal peace Federation
Xoghahayaha Golaha dhexe ee JWXO iyo Masuuliyiinta jaaliyada UK oo ka qeybgalay shirweynihii Universal peace Federation
Shirweyne Looga hadlayay Arrimaha xuquuqul Insaanka Adduunka oo ay soo qaban qaabisay Universal Peace Federation ayaa ka dhacay London. Shirkan waxaa ka qeyb galay Xoghayaha Golaha Dhexe ee JWXO Mudane Maxamed Cabdi Yaasin (Xaaji Diirane) iyo xubno kamida Jaaliyada Ogadeniya ee Londn.
Shirkan ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo la xidhiidha mawduucyo kala gadisnaa oo ay kamid ahaayeen.
Qaxootiga Aduunka iyo dhibaatoyinka ay la kulmaan, gaar ahaan markay soo galaan wadamada ree galbeedka iyo wadooyinka halista ah ay soo maraan. Waxaa kale oo looga hadlay Kaalinta Haweenka gaar ahaan Haweenka Afrika. waxaa kale oo Looga hadlay Arrimaha Diimaha iyo Xoriyada Diinta ee qofkasta heysto. Waxaa kale oo looga hadlay Arrimaha Xuquuqul Insaanka, Nidaamka Dowlad Wanaaga (Good Governence), iyo Xoriyada Saxaafada, Mucaawamada Aidka iyo arrimaha La xidhiidha nolosha Bani aadamka.
Kulankan oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka Wadanka UK, waxaa markasta oo Qodob laga hadlaba lasoo bandhigayay Dood wanaag iyada oo koox kooxo dadku uga xaajooneyneen arrimahaas kore. Xubinkastaaba uu soo bandhigayay marxalada goobta uu ka yimid iyo sida arrimahan uga jiraan.
Xaaji Diirane Xoghayaha Golaha Dhexe ee JWXO oo ka qeybgalay dood cilmiyeedkaan ayaa su’aalo soo bandhigay ay kamid aheyd. Masuuliyiinta iyo Martida sharafta leh ee kulankan kasoo qeyb gashay waxaan weydiinaya, Kumaa Garan kara Goob kamid ah Aduunkan oo Haayada Bisha ama Laanqeeyrta Cas ay san ka howl gali karin?
Su’aashaas ayaa aad loola wareeray iyada dadkii ay isku raaceen inaysan jirinba Goob aysan Bisha Cas ka howlgali karin aduunka. Xoghayaha Ayaa ugu jawaabay meeshaasi waa hadaba Ogadeniya wayna jirta.
Sidoo kale waxaa aad looga dooday Dhulalka Kheyraadka Dabiiciga leh ee Khiaafaadka xoogan ee maal iyo nafba lagu waayay sida Wadanka Congo. Doodaan ayaa waxaa kale oo lasoo dhex galiyay Kheyraadka Ogadeniya ee shidaalka oo abuuray in lagu tunto xuquuqda aadamaha Somalida Ogadeniya.
Shirkan oo ay kasoo qeybgaleen wufuud badan oo kasoo jeeda wadamada aduunka waxa kamid ahaa Libya, Masar, Denmark, iyo wadamo aad u badan.
Xubnihii uga qeybgalay Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa saxiibo badan kasoo sameystay kulankan, xidhiidhadaas oo hada si rasmi ah u bilaaban doono.